Anglisy amin'ny maha-fiteny faharoa (ESL) ao amin'ny Oniversiten'i Hodges
Sokajy: Anglisy ho fiteny faharoa, Featured
Tadiavo ny lalananao mankany amin'ny fahombiazana amin'ny alàlan'ny programa ESL!
Ity programa fanamarinana ity dia natao hanomezana Anglisy ho fiteny faharoa (ESL) torolalana ho an'ny manatsara ny efa misy anao fahalalana, fiofanana, ary fahaiza-miasa rehefa anglisy dia tsy tompon-tany fiteny. Ankoatr'izay, ny programa fanamarinana dia mety hampandroso ny fahafahanao mifandray amin'ny anglisy ary mitady asa or oniversite fotoana mety any Etazonia.
Ny programa dia mifantoka amin'ny fampivoarana sy fampivoarana ny fitsipi-pitenenana, famakiana, fanoratana, fihainoana ary Miteny fahaizana, ary fahazavan-. Ho fanampin'izany, ny fianarana ampiasana solosaina dia manamafy ny fianaranao amin'ny teny Anglisy sy ny fahaizanao rindrambaiko.
Ny kilasy ESL rehetra dia misy amin'ny alàlan'ny endrika Teknolojia Enhanced Classroom (TEC) amin'ny Internet. Amin'ny alàlan'ny TEC, azo atao izao ny mahazo ny mari-pankasitrahana anglisy anao amin'ny fiononan'ny tranonao.
Ny antsipirian'ny anglisy amin'ny maha fiteny faharoa (ESL) azy
Aiza no azonao itondrana ESL?
Hodges dia manolotra ny fampianarana ESL ao amin'ny campus Fort Myers manomboka amin'ny 8:30 maraina - 1:20 hariva Alatsinainy ka hatramin'ny Alakamisy.
Courses mandritra ny 16 herinandro isaky ny ambaratonga
Fitsipi-pitenenana (Haavo 1-3)
Famakiana / fanoratana (haavo 1-3)
Mihaino / miteny (haavo 1-3)
Fepetra takiana amin'ny programa ESL:
Ny mpangataka dia tsy maintsy manana mari-pahaizana diplaoma na GED.
Ny mpangataka dia tsy maintsy manana sata ara-dalàna hiaina sy / na hianarana any Etazonia ho an'ny fianarantsika manokana.
Ny mpangataka dia tokony ho 18 taona farafaharatsiny.
Ny mpangataka dia tsy maintsy mameno an Fepetra takiana amin'ny mpangataka ESL, izay ampiasaina hamaritana ny fahazoana miditra amin'ny programa.
Ny fanampiana ara-bola dia azo alaina ho an'ny Haavo 1-3 ho an'ireo mpianatra mahafeno fepetra. Miresaka an Mpandrindra ny fidirana hahitana raha mahafeno fepetra amin'ny fanampiana ara-bola ianao.
* Mariho azafady, ireo mpianatra iraisam-pirenena manana visa F-1 manohy ny fandaharana ESL dia mila manatrika kilasy ao amin'ny campus.
Ny antsipirian'ny fiomanana amin'ny sekoly anglisy
English fiomanana anglisy
Ny fampianarana anglisy tsy miankina amin'ny oniversite dia omena amin'ny ambaratonga avo lenta ihany koa. Ity fampianarana ity dia natao hanomezana torolàlana amin'ny teny Anglisy ho an'ireo mianatra anglisy efa mandroso izay miomana amin'ny oniversite na mila mampitombo ny fahalalany ny anglisy anglisy ho an'ny tanjona matihanina.
Fianarana iray maharitra 16 herinandro
Famakiana, fanoratana ary fitsipi-pitenenana (haavo 4)
Aiza no azonao itondrana anglisy prep?
Hodges dia manolotra ny taranja anglisy amin'ny fiomanana amin'ny teny anglisy ao amin'ny campus Fort Myers manomboka amin'ny 8:30 maraina - 1:00 hariva Alatsinainy ka hatramin'ny Alakamisy.
Tetezana anglisy mahery
Tetezana fandaharana anglisy mavesatra
Ny Intensive English Program Bridge dia natao ho an'ireo izay mila torolàlana amin'ny teny Anglisy hanohy ny mari-pahaizana ao amin'ny Hodges University. Ity programa ity dia manolotra mpianatra izay ny fitenin-drazany dia tsy anglisy an Mazava ho azy fa izany natao hanomanana anao hamaky, hanoratra ary hampiasa fitsipi-pitenenana sy voambolana. Ny programa dia ampianarin'ireo mpampianatra ESL izay manome fanao betsaka amin'ny fahatakarana sy fampiasana fitaovam-pianarana eny amin'ny oniversite.
Ny fampianarana 12-bola dia atolotra amin'ny ambaratonga avo lenta amin'ny fahaizana anglisy, tapa-kevitra rehefa handray ny HU Entrance Test. Ny fampianarana 16 herinandro dia atolotra ao amin'ny campus Fort Myers sy Naples.
Aiza no ahafahanao mandray anglisy mazoto?
Fepetra takiana amin'ny fidirana anglisy:
Ny mpangataka dia tsy maintsy manana sata ara-dalàna hiaina sy / na hianarana any Etazonia.
Misy fanampiana ara-bola ho an'ireo mpianatra mahafeno fepetra.
Mifandraisa amin'ny fidirana Raha mila fanazavana fanampiny.
Johnny Dorrine, mpiasa ao amin'ny BB&T ary nahazo diplaoma amin'ny programa Hodges ESL ary momba ny fitantanan-draharaha
"Noho ny Bridge Programme anglisy be loatra ao Hodges, dia afaka nandroso tamin'ny alàlan'ny kilasy ESL aho, bakalorea momba ny fitantanan-draharaha, ary tamin'ny asa mahaliana eo amin'ny banky ao amin'ny BB&T."